Shariif Sh Axmed oo tacsi u direy shacabkii uu ku awrkacsaday - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Shariif Sh Axmed oo tacsi u direy shacabkii uu ku awrkacsaday
Shariif sh Axmed oo wararku sheegayaan inuu boorso weyn oo buuxda kala soo noqday Imaaraadka ayaa hadda ka xumaaday dagaalkii ay ka rideen Muqdisho kadib markii maleeshiyo lagu awrkacsaday soo galeen isla xaafadihii uu deganaa.
”Waxaan ka xumahay dagaalka dhacay waan laga baaqsan karay ayuu yiri fadhiid Shariif Sh Axmed oo eeda dagaalka hadda u weeciyay barlamaanka welina isku xiraya dagaalka iyo doorashada dib loo dhigey.
Shariif sh Axmed oo hore ugu awrkacsaday Hawiye ayaa ku dhaartey inuu Muqdisho dagaal ka ridayo dawladana ka tuurayo, haddana wuxuu leeyahay dagaal faaiido inooma leh ee xalku siyaasi ha noqdo, goormuu saxan yahay macalin quraankii hore.
Waxase soo baxaya burbur ku yimi awrkacsigii HAWIYE qaarkood ee ku fikiraayay inay dawlada XAMAR ka saari karaan oo faaiido ugu jirto qabyaalad kicin, xiisana u qabaan dagaal. Hay’adda qaxootiga ee qaramada midoobey ayaa iyaguna durba soo saaray dagaalkii koobnaa inta qof ee kooxda Hawiye ku awrkacsatey barakiciyeen, kuna sheegeen 100,000 oo qof.